Golis oo door muuqda ka qaadatay xarig jarkii Jaamacadda Maakhir ee ka dhacday Badhan | Golis Telecom Somalia
Golis oo door muuqda ka qaadatay xarig jarkii Jaamacadda Maakhir ee ka dhacday Badhan
Shirkadda Isgaarsiinta Golis ayaa door muuqda ka qaadatay munsaabadihii kala duwanaa ee uu ka qayb galay madaxweynaha dawladda Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas ee ka dhacay degmada Badhan ee gobalka Sanaag asbuucii lasoo dhaafay.
Koox kamid ah shaqaalaha shirkadda Golis oo ka ambabaxay magaalada Boosaaso maalin kahor safarka madaxweynaha ee Badhan ayaa gaaray Badhan iyagoo halkaas ku diyaariyay Internet Xawaare sare leh oo loogu talagalay in warbaahintu si toos ah ugu tabiso munaasabadda xarig jarka jaamacadda Maakhir oo uu madaxweynaha Puntland xarigga ka jaray maalintii talaadada.
Hawlaha ay shirkadda Golis ka qabatay Badhan kuma ekayn oo kali ah munaasabadda xarig jarka Jaamacadda Maakhir balse waxay la fududaysay saxaafadda iyo dawladdaba in dhammaan barnaamijyadii Badhan lagu qabtay ay noqdaan kuwo si Live ah looga daawado caalamka waxana kamid ahaa shirkii golaha wasiiradda ee badhan lagu qabtay, kulankii Madaxweynaha iyo dhalinyarada iyo kulankii golaha joogtada ah ee Baarlamaanka Puntland oo isna ka dhacay degmada Badhhan.
Shirkadda Golis waxay noqotay shirkadda Kali ah ee shaqadaas qabatay, mana jirin shirkad kale oo adeeg internet iyo hawlo kale toonna gaysay goobaha ay munaasabadaha kala duwan ka dhacayeen.
Shirkaddu waxay sidoo kale xil iska saartay wafdiga madaxweynaha Puntland inay helaan adeegga internetka shirkadda Golis inta ay ku suganaayeen Badhan sidaas darteedna qalabkii adeegga Internet lagu xiray guriga la dajiyay madaxweynaha oo ahaa guriga Suldaan Siciid si ay madaxdu u helaan adeegga internetka ee shirkadda Golis muddada ay joogaan Badhan.